नेपालगन्ज गोल्डकपको उपाधी सुदूरपश्चिमको कव्जामा — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » खेलकुद → नेपालगन्ज गोल्डकपको उपाधी सुदूरपश्चिमको कव्जामा
नेपालगन्ज गोल्डकपको उपाधी सुदूरपश्चिमको कव्जामा
May 6, 2016१८४ पटक
ए डिभिजनको एपीएफ क्लबलाई १,० ले हराउँदै सुदूरपश्चिम ११ ले नेपालगन्ज गोल्डकपको उपाधी चुमेको छ ।
खेलको निर्धा्रित समय सकिन दुई मिनेट बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिमका जर्सी न. ५ का माधव भण्डारीले निर्णायक गोल गरेका थिए । उनी फाईनल खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए । विजेताले १ लाख ५१ हजार नगद, शिल्ड र प्रमाणपत्र पाएको छ । एपीएफले उपविजेता भई १ लाख पुरस्कारमा चित्त बुझाएको छ ।
नेपालगन्ज गोल्डकपका सर्वोत्कृष्ट खेलडीको पुरस्कार सुदूरपश्चिमका जर्सी नं. १४ का फिलिप तामाङले पाएका छन् । त्यस्तै, बेष्ट डिफेन्डर सुदूरपश्चिमका नरेन्द्र चौधरी भए भने बेष्ट स्टाईकर विनोद केसी भएका छन् । त्यस्तै, बेष्ट मिड फिल्डरका रुपमा एपीएफ का पाल्साङ लामा भएका छन् भने बेष्ट गोलकिपरको पुरस्कार एपीएफका रोशनलाई दिईएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलगायतको उपाधी विजेता टिम र खेलाडीलाई शिल्ड, चेक र प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम टिमका प्रशिक्षक सुरेश हमालले आफ्नो टिमले पहिलोपल्ट राष्ट्रियस्तरको गोल्डकप खेलेको र सफल भएकोभन्दै खुशी व्यक्त गरे । ’खेल अनुसार सहज जित निकाल्नुपर्ने हो’ उनले भने,’एउटा मात्र निर्णायक गोल गर्न सक्यौ ।’
एपीएफका प्रशिक्षक कुमार थापाले पनि आफ्नो टिम निकै कमजोर खेल प्रदर्शन गरेको स्वीकारे ।’ खेलमा जस्ले राम्रो खेल्छ उसैले जित्ने हो’ क्वार्टरफाईनल र सेमिफाईनलका तुलनामा खेल्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने,’खेल अनुसार सुदूरपश्चिमले धेरै गोल गर्छ जस्तो लागेको थियो । धन्न एक गोल मात्र खाईयो ।’ दुई वटा पहेलो कार्ड पाएर घनश्याम थारु फाईनल खेल्न नपाउनुले पनि आफ्नो टिम कमजोर भएको थापाले बताए ।
बाँके जिल्ला फुटबल संघले झण्डै ३५ बर्षपछि राष्ट्रियस्तरको फुटबल स्पर्धा आयोजना गरेको हो । नेपालगन्ज गोल्डकपमा ए डिभिजन खेलेका तीन क्लब र एक भारतीय टिमसहित ८ टिम सहभागी थिए । आयोजक संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीले प्रथम गोल्डकप सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आउँदो बर्ष गर्मी नलाग्दै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताएका छन् ।